ဘဝကို အရှုံးမပေးဘဲ သမာအာဇီဝကျကျ ပင်ပင်ပန်းပန်း ပေါင်မုန့် ရောင်းနေတဲ့ ဦးလေးကြီး တစ်ဦးကို ပြုံးပျော် ပီတိဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ မိုးစက်ရဲ့ အလှူလေး – Shwe Yaung Media
ဘဝကို အရှုံးမပေးဘဲ သမာအာဇီဝကျကျ ပင်ပင်ပန်းပန်း ပေါင်မုန့် ရောင်းနေတဲ့ ဦးလေးကြီး တစ်ဦးကို ပြုံးပျော် ပီတိဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ မိုးစက်ရဲ့ အလှူလေး
အခုလို ကာလတွေမှာတော့ အားလုံးက အနည်းနဲ့ အများတော့ အခက်အခဲတွေ အကျပ်အတည်းတွေကို တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ရှိနေကြလို့ အားတင်းကာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြရပါတယ် ။
ဒီလို အချိန်မှာ လက်လုပ်လက်စားနဲ့ လမ်းမှာ ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ပြည်သူ အချို့ရဲ့ ဘဝတွေက ထင်ထားတာထက်တောင် ခက်ခဲနေကြမယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ ။
ဒီလို အခြေအေနေဆိုးတွေကို မကြည့်ရက်တဲ့ စေတနာရှင် ပြည်သူတွေ ၊ ပရဟိတ အသင်းတွေက တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာ လူရွှင်တော် မိုးစက်လည်း အပါအဝင်ပါပဲ ။
မိုးစက်က အခုလည်း ဘဝကို အရှုံးမပေးဘဲ သမာအာဇီဝကျကျ ပင်ပင်ပန်းပန်း ပေါင်မုန့် ရောင်းနေရှာတဲ့ ဦးလေးကြီးကို တွေ့ပြီး ကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ဒါကတော့ ” ဦးလေး ပေါင်မုန့် ဘယ်လိုရောင်းလဲ..??? ” ပေါင်မုန့် တစ်ထုပ်ကို ၁၀၀၀ ပါ သား ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို သား..ပေါင်မုန့် ၁၀လုံးလောက် ယူမယ်နော်…”ဦးလေးကြီး ပေါင်မုန့်ထည့်နေတဲ့အချိန် ပိုက်ဆံ ၅သောင်း ကပြာကယာထုပ်ပြီး…
ဦးလေး ရော့ ပေါင်မုန့် ၁၀ လုံး ဖိုး… ” ဟာ…မဟုတ်ဖူးလေ သား…၁၀လုံး ဆို တစ်သောင်းတန်…တစ်ရွက်ထဲ ပေးရမှာလေ….”ဟို သားကလေ ဦးလေးကို ကန်တော့တာပါ…”ဟင် …ဘာဖြစ်လို့ ကန်တော့တာလဲ…”ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး…
နေပူမိုးရွာထဲမှာ…ဘဝကို အရှုံးမပေးဘဲ သမာအာဇီဝကျကျ အလုပ်လုပ်သူတွေကို တွေ့ရင် သားက ဂုဏ်ပြုပေးချင်လို့ပါ…
သားကန်တော့တာလေးကို လက်ခံပေးပါနော်…” ဟုတ် ဦးလေး လက်ခံလိုက်ပါမယ် သာဓု သာဓု သာဓု ပါ သားရယ်….” ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ သမာအာဇီဝတွေ အမြန်ဆုံး အခက်အခဲများမှ ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေဗျာ…။ ” ဆိုပြီး အကြောင်းစုံ ဖော်ပြထားရာ ဖတ်ပြီး
ပီတိဖြစ်လွန်းတာကြောင့် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ ။
ဘဝကို အရႈံးမေပးဘဲ သမာအာဇီဝက်က် ပင္ပင္ပန္းပန္း ေပါင္မုန႔္ ေရာင္းေနတဲ့ ဦးေလးႀကီး တစ္ဦးကို ၿပဳံးေပ်ာ္ ပီတိျဖစ္သြားေစခဲ့တဲ့ မိုးစက္ရဲ႕ အလႉေလး
အခုလို ကာလေတြမွာေတာ့ အားလုံးက အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ အခက္အခဲေတြ အက်ပ္အတည္းေတြကို တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ရွိေနၾကလို႔ အားတင္းကာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကရပါတယ္ ။
ဒီလို အခ်ိန္မွာ လက္လုပ္လက္စားနဲ႔ လမ္းမွာ ရွာေဖြစားေသာက္ေနရတဲ့ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျပည္သူ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဘဝေတြက ထင္ထားတာထက္ေတာင္ ခက္ခဲေနၾကမယ္ဆိုတာ အမွန္ပါပဲ ။
ဒီလို အေျခေအေနဆိုးေတြကို မၾကည့္ရက္တဲ့ ေစတနာရွင္ ျပည္သူေတြ ၊ ပရဟိတ အသင္းေတြက တတ္ႏိုင္သေလာက္ လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္ ။ ဒီအထဲမွာ လူ႐ႊင္ေတာ္ မိုးစက္လည္း အပါအဝင္ပါပဲ ။
မိုးစက္က အခုလည္း ဘဝကို အရႈံးမေပးဘဲ သမာအာဇီဝက်က် ပင္ပင္ပန္းပန္း ေပါင္မုန႔္ ေရာင္းေနရွာတဲ့ ဦးေလးႀကီးကို ေတြ႕ၿပီး ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္ ။
ဒါကေတာ့ ” ဦးေလး ေပါင္မုန႔္ ဘယ္လိုေရာင္းလဲ..??? ” ေပါင္မုန႔္ တစ္ထုပ္ကို ၁၀၀၀ ပါ သား ဟုတ္ကဲ့ ဒါဆို သား..ေပါင္မုန႔္ ၁၀လုံးေလာက္ ယူမယ္ေနာ္…”ဦးေလးႀကီး ေပါင္မုန႔္ထည့္ေနတဲ့အခ်ိန္ ပိုက္ဆံ ၅ေသာင္း ကျပာကယာထုပ္ၿပီး…
ဦးေလး ေရာ့ ေပါင္မုန႔္ ၁၀ လုံး ဖိုး… ” ဟာ…မဟုတ္ဖူးေလ သား…၁၀လုံး ဆို တစ္ေသာင္းတန္…တစ္႐ြက္ထဲ ေပးရမွာေလ….”ဟို သားကေလ ဦးေလးကို ကန္ေတာ့တာပါ…”ဟင္ …ဘာျဖစ္လို႔ ကန္ေတာ့တာလဲ…”ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး…
ေနပူမိုး႐ြာထဲမွာ…ဘဝကို အရႈံးမေပးဘဲ သမာအာဇီဝက်က် အလုပ္လုပ္သူေတြကို ေတြ႕ရင္ သားက ဂုဏ္ျပဳေပးခ်င္လို႔ပါ…
သားကန္ေတာ့တာေလးကို လက္ခံေပးပါေနာ္…” ဟုတ္ ဦးေလး လက္ခံလိုက္ပါမယ္ သာဓု သာဓု သာဓု ပါ သားရယ္….” ကြၽန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ သမာအာဇီဝေတြ အျမန္ဆုံး အခက္အခဲမ်ားမွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ…။ ” ဆိုၿပီး အေၾကာင္းစုံ ေဖာ္ျပထားရာ ဖတ္ၿပီး
ပီတိျဖစ္လြန္းတာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါရေစ ။
ဆိုင်ကယ် ၂ ယောက်စီးသူများကို ပစ်မိန့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီမှပြောကြား
မိခင်ကြီးအတွက်ရည်စူးပြီး အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခြူးလေး